Talooyin Wanaagsan laga soo Saaro Khabiirka Cimilada ee shabakadaha
Maanta websiyo badan ayaa leh tayada xog, iyo raadiyayaashu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan Waxyaabaha qaarkood si aad u ogaatid sida loo dhammeeyo burburinta. Ganacsiyo badan ayaa isticmaala shabakadda webka si ay u helaan bangiyada waaweyn ee xogta khuseeya. Inkasta oo boggaga intarnetka intooda badani ay ku haboon yihiin nidaamyada ammaanka, badiyaa daalacayaashu waxay bixiyaan qalab aad u wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah talooyin wanaagsan oo loogu talagalay raadiyeyaasha webka kuwaas oo raba in ay ka soo saaraan xogta laga helo bogag kala duwan oo degdeg ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee waraaqaha webka waa in la helo dhammaan qalabka saxda ah ee lagu bilaabayo bogagga shabakada. Tusaale ahaan, waxay ku bilaabi karaan adigoo isticmaalaya shabakadda internetka ee internetka oo ka caawin kara inay qabtaan shaqada. Dhab ahaantii, waxaa jira aalado badan oo online ah hawshan. Markaad ka goosaneyso shabakadaha, waxay u baahan yihiin inay xajiyaan dhammaan xogta qaraabada ah ee ay soo dejiyeen. Natiijo ahaan, waxay ku haysan karaan hal meel oo ka mid ah liisaska kala duwan ee URL-yada ee bogaga cilladeysan. Tusaale ahaan, waraaqaha shabakada waxay u baahan yihiin in ay dhisaan jadwal kala duwan oo ku jira xogtooda si ay u keydiyaan dukumeentiyada la soo koobay.Si gaar ah, khariidadaha shabakadu waxay sameeyaan faylal kala duwan si ay u kaydiyaan xogtooda dhammaan kombuyuutarkooda, si ay u falanqeeyaan mar dambe.
Abuur Gaariga ah si aad u xoqdo shabakado badan oo shabakado leh
Kaararku waa barnaamij gaar ah oo wax laga soo qaado oo ku socda bogagga kala duwan ee bogagga si aad u hesho macluumaadka ku haboon. Waxay ka heli kartaa macluumaad badan oo lagu kaydiyey bogag kala duwan oo dhan oo dhan internetka. Iyada oo la dhiso iyo ilaalinta caarada (ama bot), macnaheedu waxa weeye waxay ku wareegi karaan fikirka webka si kala duwan. Internetku waa meel aad u weyn, oo aanay u baahnayn in ay u adeegsadaan oo kaliya in ay akhriyaan maqaalado oo ay helaan macluumaad guud oo ku saabsan meheradaha warbaahinta bulshada ama booqashada dukaamada. Halkii waxay u isticmaali karaan faa'iidadooda. Waa meel aad u ballaaran, oo ay isticmaali karaan barnaamijyo kala duwan si ay u sameeyaan waxyaabo ka caawin doona horumarinta iyo kor u qaadka waxqabadka ganacsigooda.
Dhab ahaantii, caaradu waxay ku dhejin kartaa bogag iyo soo saarida iyo koobi xogta. Natiijo ahaan, baarayaasha webka waxay isticmaali karaan dhammaan hababka loo soo bandhigo taasoo xawaareyn karta xawaaraha xawaareynta si toos ah. Waxay kaliya ay tahay in ay isku hagaajiyaan caarada xawaaraha qadarka ah. Tusaale ahaan, waxay abuuri karaan caaro isku dhejinaya goobo cayiman waxayna sameeyaan wax sida caadiga ah isticmaala caadiga ah. Waxaa intaa dheer, caaradu waxay kaloo heli kartaa xogta adigoo isticmaalaya API-ga sidaa darteed waxay sameyn kartaa hawlo kala duwan markaad gasho goobo kale. Raadinta Webka kaliya waxay u baahan tahay in la xasuusto in caaradii burburku ay ku qasban tahay in ay bedesho qaabkeeda halka ay ku socoto bogagga internetka.